အမျိုးသမီးများ အားလုံးအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » အမျိုးသမီးများ အားလုံးအတွက်
Posted by chityimhtoo on Dec 23, 2011 in Society & Lifestyle | 1 comment
မိမိတို့၏အတွင်းခံေ…ဘ်ာလီများကို မ၀တ်ခင်လျှော်ဖွတ်ကြပါရန်…. အခုအချိန်မှ စရ်ျအမျိုးသမီးများ ခင်ဗျား မိမိတို့၏အတွင်းခံအကျီ င်္များကိုယခုပင် ၀ယ်လာသော အသစ်ဖြစ်ပါစေ လျှော်ပီးမှသာ ၀တ်ဆင်သောအကျင့် ကိုမွေးမြူကြပါရန်…. အင်မတန်မှအရေးကြီးပါကြောင်း တင်ပြပါရစေ….
ဟုတ် သိတော့သိသလိုလားလို့ ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လျှပ်တပြတ် ဂျာနယ်မှာ ပုံနဲ့ပြထားပါတယ်။ ဒေါက်တာ အောင်ခင်ဆင့် ပြန်လည်ရှင်းပြထားပါတယ်။